ငှက်ပျံကြီးသို့မွေးနေ့ ဆုတောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ငှက်ပျံကြီးသို့မွေးနေ့ ဆုတောင်း
ငှက်ပျံကြီးသို့မွေးနေ့ ဆုတောင်း
Posted by ဂျစ်စူ on Oct 17, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary | 41 comments
အရင်ကတော့ ရွာထဲမယ် ဘုရားဒဂါ ကျောင်းဒဂါ အဖျော်ဆရာ တံခါးမူး ဂိတ်မူး ရွှေပေါက်တူး ဆို တစ်ရွာလုံး
ဖိန့် ဖိန့် တုန်ပဲ။
မတုန် ခံနိုင်ရိုးလား…အဲတုန်းက ငလျင် ခဏခဏလှုပ်ဆိုပဲ..အဲလေ..ဟုတ်ပါဘူး..ရွာဝင်တံခါးဝမှာ မူးမူးပြီး ဂိတ်စောင့်နေ့ တတ်လို့ရွာဝင် ရွာထွက် ၊ ဘယ်သူဘာလုပ် သူအကုန်သိ။
ရုတ်စွအဆုံး သဂျီးလိပ်ဂေါင်းထွက်တာကအစ အူးဗိုက်နဲ့နန်းခင်ဇယာ မရှင်းမရှင်း ဖြစ်တာအဆုံး သူအကုန်သိ။
မရှင်းမရှင်း ဆိုတာ တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ အူးဗိုက်ကရှင်းပြီးသား။ မရှင်းတာက မစ်စ် နန်းခင်ဇယာ ရူးရူးနေတဲ့ ရွာထိပ်က
ဗယာကြော်ကလမ မဆာမိက ဒန်ဖလားတစ်လုံးကိုင်ပြီး နွားလှည်းနဲ့လယ်ကွင်းတစ်ပတ် ပတ်ချင်တယ်ဆိုပြီး အူးဗိုက်ကိုလိုက်လိုက်ဆွဲတတ်လို့မနဲ ထွက်ပြေးရတဲ့ မရှင်းမရှင်း ကိစ္စတွေဆိုလိုတာပါ။
အဲလို ဘသူဘာလုပ်လုပ် ဂိတ်ဝက ထိုင်ထိုင်ကြည့်တတ်တော့ ကျီးမိုက်လား….စာဂလေးမိုက်လားတော့မသိ ဦးပြောင်စိန်လိုလို ဦးကျော်ဟိန်းလိုလို လူကြီးဆို
မာဆတ်က ပြန်လာတိုင်း တံခါးမူးကို ၀က်ခေါက်ကြော်တစ်ပွဲ လာဘ်သိပ်ထိုးရတယ်ဆိုကလားပဲ။
၀က်ခေါက်တို့ငါးရှဥ့်မြေအိုးတို့တစ်ပွဲပွဲ မပါလာရင် အူးမိုက်ဂဒေါ်ကို ကေတီဗီမာဆတ်ကိစ္စ နောက်နေ့ ပြန်ဖွတယ်ဆိုပဲဗျာ။
(သူကျတော့ လှည်းတန်းကအငယ်လေးနဲ့ စုံတွဲခုတ်နေကျဆိုလားပဲ လေယာဉ်မူး ဦးနို့ ဇို့ မိပေါဒါ .သားလဲသိဘူး)
အဲလို မဟုတ်တာမလုပ်ရဲအောင် ဂိတ်စောင့်နေတတ်တဲ့ လူကြီး၊ အရင်က တံခါးမူး..အဲ..မှူးလို့ ခေါ်ကြတဲ့လူကြီး ။
ခုတော့ သူ့ ကို ဘယ်လိုခေါ်ကြလဲမသိ၊ ပုံမှာတော့ ငှက်ပျံကြီး တင်ထားတာတွေ့ တာပဲ..ဆိုတော့ ငှက်ပျံကြီးပေါ့လဗျာ။
အဲဒီငှက်ပျံကြီးက လာမဲ့ဒီလ ၂၁ ရက်၊ တနင်္လာနေ့ ဆို အသက် (- – ) နှစ်ပြည့်ပါပြီဗျာ။
သူ့ ရဲ့ အသက် ကွက်လပ် ကွက်လပ်ပြည့် မွေးနေ့ ကို ရွာသူားတွေ အချိန်မီလေး မေတ္တာဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးနိုင်ကြအောင် ကျော်လဲ ချိန်မီလေး ပြေးသတင်းပို့ လိုက်တာပါ။
အဲလေ ..ထိုင်ပြီး သတင်းပို့ လိုက်တာပါ။
ပြေးပီးစာရေးလို့ မှ မရပဲ..နောစ်..။
သိတဲ့အတိုင်း ကျော်က ဘာလုပ်လုပ်ပြတ်ပြတ်သားသားဆိုတော့ လိုရင်းတိုရှင်းပဲပေါဒေါ့မယ်ဗျာ ။ သွပ်ပျားတွေလို အဲ သများတွေလို အဲလေ ဟုတ်ပါဘူး သူများတွေလို ဝေ့ ၀ိုက်စကားပလ္လင် ခံတတ်တာမဟုတ်ဘူးရယ်။
ဒဲ့ဆို ဒဲ့၊ တွတ်ဆို တွတ်၊ ဘွတ်ဆို ဘွတ်ပဲ။ ခုလဲ ဘွတ်ချင်နေပြီ ချဉ်ပေါင်ကြော်နဲ့ပဲဟင်းနဲ့ ၂ပန်းကန် ဆွဲထားလို့ ၊ ဒါတောင် နောက်တစ်ပန်းကန် ဆွဲမယ်လုပ်တော့ အလှူအိမ်က ကုန်ပြီဆိုပြီး ပြောလို့ရှက်ပြီး မဆွဲခဲ့တာ။ အဲတာ..
အီးနှစ်လုံးလောက်ပေါက်ချင်လို့ခဏ ၂ ခေါင်းပိတ်ထားကြပါ။ ကန်တော့ပါရဲ့ ဘွတ်ခ်စ်…ဘွတ်ခ်စ်..။
အောင်ဘုဆိုတဲ့ လိင်တူချစ်သူက ဗုံး ၂ လုံး ပေါက်တယ်ထင်ပြီး ရွာသဂျီးကို ပြေးသတင်းပို့ တယ်။
လာမဲ့ အောက်တိုဘာ ၂၁ မှာ ကျရောက်မဲ့ ကျော့်တိုရီး ၊ ဒဂါးမူးကြီး၊ လှည်းတန်းက အငယ်လေးနဲ့ စုံတွဲခုတ်တဲ့ တိုရီး (ကျော်ပေါဒါဟုတ်ဘူး အူးနို့ စို့ မိပေါဒါ)၊ တိုရီး တိုနှက်ပျံ အဲ..ကိုငှက်ပျံရဲ့ ကွက်လပ်ကွက်လပ်ပြည့် မွေးနေ့ မှသည် နှစ်ပေါင်းများစွာထိ အူးဗိုက်ကို ဘီအီးအ၀တိုက်နိုင်ပါစေ..လို့ မဆိုလိုဘူး။
နှစ် ၁၂၀ တိုင်တိုင်၊ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့မိသားစုအကျိုး၊ ရပ်ကျိုးရွာကျိုး နိုင်ငံ့အကျိုး ဆထက်တိုးပြီး ထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေဗျာ။
အူးဗိုက်လိုပဲ စော်ကြည်ထီပေါက် နိုက်ကလပ်ရောက်၊ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ မိန်းမခေါက် အဲလေ…
အူးဗိုက်လိုပဲ ဗလတောင့်တောင့် ရုပ်ဖြောင့်ဖြောင့် ဖြစ်ပါစေဗျာ။
အောင်မယ်..အူးဗိုက် ဗလတောင့်တယ်ဆိုတော့ ဟိုလူကြီးက လာပြောင်ပြနေတယ်..ကဲလဟယ် ဗလတစ်လုံး ထုတ်ပြလိုက်မယ်..အွတ်ခ်စ်..ဘွတ်ခစ်..။
အူးဗိုက် ဗလထုတ်တာ ဗလမထွက်ပဲ အီးထွက်သွားတော့ လိင်တူချစ်တူကြီးက တတိယမြောက် ဗုံးပေါက်တယ်ဆိုပြီး သဂျီးကို အပြေးသတင်းပို့ ပြန်လေရဲ့။ သဂျီးလဲ ဗုံးဆိုတာမဆုံးခင် ဗုံအဆင့်ပဲ ရှိသေး မြေအောက်ကတုတ်ကျင်းထဲ ဒိုင်ဗင် ခုန်ဆင်းတာ ပြောင်နေတာပဲတဲ့။ဘာပြောင်တာလဲ ရန်ကုန်ရောက်မှမေးကြည့်တော့။
Oct 21st ရောက်တိုင်း ကိုဘလက်တစ်ယောက် ဘလက်ခ် သောက်ပြီး ဟပ်ပီးဘသ်ဒေး များကြီးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေရယ်လို့ 
မြောင်းတကာ အူးဗိုက် ဘီအီးခိုက်မှ မွေးနေ့ ဆုမွန်ကောင်း စတင် တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား။
အားလုံးပဲ သီတင်းကျွတ်မှာ ကျွတ်ကြပါစေ။
မတွေ့ရတာကြာလို့လား မသိဘူး စိန်ဗိုက် ပိုရမ်းလာတယ်။ (အဗာတာက ပုံ ပြောပါတယ်။)
မွေးနေ့ရှင်အဖျော်ဆရာအကျော်လည်း နောက်ထပ်နောက်ထပ် မွေးနေ့ပေါင်းများစွာဆင်နွှဲနိုင်ပြီး မော်စရာအပျော်လေးတွေ ပြည့်ပါစေလို့………
ကဲကဲ … ပြန်​စလိုက်​ကြမယ်​​ ​နော…
စိန်​ဗိုက်​ပြန်​လာခြင်း သည်​လည်း မင်္ဂလာ တတစ်​ပါးဖြစ်​သလို….
ကိုဘလက်​ကြီးလည်း ​မွေး​နေ့မှသည်​ သက်​ဆုံးတိုင်​ ​ပျော်​ရွှင်​ပါ​စေဗျား….
နင့်ပို့စ်တွေ့ဒေါ့ ဟိုသချင်း ဆိုလိုက်မိဒယ် …
အခုလို ပျံလည် စုံတွေ့ရဒါ ဝမ်းသာ မဆုံးနိုင်ဘေ ..
မီးဘုံးလှလှလေးဒွေ ရောင်စုံထွန်းး ထွန်းး လို့လေ …
အခုမှ ပို့စ်ဖတ်ပီးတာ … ဟီးးးး
ဥဘလက်ဂျီးတစ်ယောက် လာမယ့် ၂၁ ရက်မှာ ကျရောက်တဲ့ နှစ် ၆၀ မွေးနေ့မှစလို့
စိတ်အိ ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်အိ ကျန်းမာခြင်းများနဲ့ ပြည့်စုံနိုင်ဘာစေဂျောင်းး
ညီငယ် ပူတူးတူးလေး အံချာဒုံးမှလည်း ဆုမွန်ဂေါင်း တောင်းပေးလိုက်ဘာဂျောင်းး
၆၀ ပြည့်မွေးနေ့ မဟုတ်ပါဘူး
အခုက ၅၉ နှစ်ပဲ စိပါသေးတယ်ဟဲ့
နင်ဂ ဘာနဲ့ တိုင်းဒါဒုန်း
ငါက ဟိုဒင်းနဲ့ တိုင်းဒါ …
ဒါဂျောင့် ၆၀ လို့ အတိအကျ ပေါဒါဘာ …
ပြန်လာပြီလား ကိုရင်ဗိုက်… ဝမ်းသာတယ်ဗျာ….
ကိုဂျီးဘလက်က ကျောက်စ်ထက် ၁နှစ်နီးနီး အသက်ကြီးတာမို့…
ကြို… ဆုတောင်းပေးလိုက်မယ်… ဟတ်ပီးဘတ်ဒေး ချစ်ကိုဂျီး… ဟီး ဟီး
ဟယ်အိုက်လာဆိုကျောက်စ်က ၆၀ ပေါ့
ပေါက်ဖော် ပြန်ရောက်တယ်ဆိုလို့ အပြေးလာခဲ့တာ ရောက်ရောက်ချင်း အီးနံ့သင်းသွားတယ် ။
မွေးနေ့ရှင် အူးလေးဘလက်ရော ပို့စ်တင်ပေးတဲ့ ပေါက်ဖော်ပါ ပျော်ရွှင်ကြပါစေနော
စိန်ဗိုက် ပြန်လာပြီဆို ဟိုတခါပြောထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းလေးဖွင့်လိုက်တော့မယ်နော်။
ကိုဘလက် က အောက်တိုဘာသားပဲကိုးးးးး
မွေးနေ့ရက်ရောက်မှ လက်ဆောင်ပေးတော့မယ်လို့ ဒီလူဂျီးကို။
ဟယ် မူလလက်ဟောင်း စိန်ဗိုက် အစစ်နော်… ဂယ်ပြန်လာဘီပေါ့….
ကောင်းပါတယ် ဒါပေမဲ့ အရင်လို တစ်စက္ကန့် ကို လက်သီးလုံး တစ်ရာတော့ မထွက်တော့ဘူး
ဟဲ့ .. ဟဲ့ …
ရွာစောင့် အပျိုကြီး ကို ဘယ့်နှယ့် သွားထိုးတာဒုန်းး
(လက်သီးနဲ့ ပေါဘာဒယ် …)
ဒီအံချာတော့ ပြားအောင် အထုခံချင်နေဘီ…
စိန်ဗိုက်က ရပ်ကွက်ထဲက အရူးမဂျီးနဲ့ စေ့စပ်ထားတာ.. ဘာမှလဲ မသိပဲနဲ့.. အာ့ဂျောင့် နိဂို နာတို့ လုံမက အသေနှိပ်ကွပ်တာ… (ကြုံတုံး ရန်တိုက်မှ)
သူက အောက်တိုဘာ ၂၁ ၊ ကောင်းရောကွာ
ငါနဲ့ အတူတူပေါ့ ၊ ကဲ လာမယ့် တနင်္လာ ဝိုင်းလိုက်ရရင်ကောင်းမယ်
( အောက်တိုဘာ ၂၁ မှ အောက်တိုဘာ ၂၁ သို့ မွေးနေ့ဆုတောင်း )
လေးဘလက် မွေးနေ့ ဆုတောင်းစကားလေးတွေနဲ့
ကျနော်တို့ ဦးဗိူက်ကို လွမ်းနေတာ
ပိုင်ဆိုင်မြဲ ပိုင်ဆိုင်ပါစေ လို့ 
အောင်မယ်လေး မသေလို့တွေ့ရ၀မ်းသာလှ အဲဟုတ်ပေါင် ညီအေ ပျောက်လိုက်တဲ့အချက်နှယ့်နော်။ နာဒို့ကလွမ်းနေဒါအေ့။ ပြန်လာခဲ့ဘာအေ။ နောက်ကိုလဲညီးပိုစ့်ကလေးတွေဖတ်ချင်သေးတယ်အေ။
ဦးဘလက်ရေ (–) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ သာမီးမော်ဒယ်လေးများနှင့်ပျော်နိုင်ပါစေ။ အသက်ရာကျော်ရှည်ပါစေ
မွေးနေ့ရှင်ကို ဆုတောင်းပေးဖို့ကျန်ခဲ့လို့ ပြန်လာတာ…
အူးဘလက်တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ပါစေ… (ခွက်ဒစ် မိဗုံ)
ဒီလိုဆို​တော့ ကျုပ်​လဲဝင်​ဆု​တောင်းရ​ပေမ​ပေါ့ ………..
ချစ်​​သောတိုဘလက်​​ချောတစ်​​ယောက်​ ၃၃ နှစ်​မြောက်​​မွေး​နေ့မှာ ချမ်း​မြေ့​ပျော်​ရွှင်​ပါ​စေ။
(ဒါမှ ကီးမားပလာတာ​​ မ​ကျွေး​သေးရင်​ ဒင့်​ကို ​သေခန်းဖြတ်​မယ်​)
ဟယ် ဦးဘလက်က အနော်ထက် 1ရက်ပဲ ကြီးတယ်တော့ …
ဟယ် ဦးဘလက်က အနော်ထက် 1ရက်ငယ်တာပဲ
ဟဲ့ကောင်မ ငဗိုက် ညည်းနှယ့်အေ နေရက်လိုက်တာ တကယ်ပဲ… ဘယ်သွား သဝေထိုး သငယ်ရှာနေသဒုံး..
ညည်းဟာကလဲ ဗုံးတွေကွဲမှ ပဲ ပေါ်လာတော့တာပဲအေ………….
ဟိုလူကြီးအသက်က ၄၄ နှစ် တိတိ ဗျို..
ဟိုကျန်ခဲ့တဲ့နှစ်က ကျုပ်အဖေ ၄၂ မှာ ဆုံးသွားတာ… သူက ကျော်သွားတော့ အားရ၀မ်းသာပြောသွားသေးတယ်..ဟိဟိဟိ
အသက်ဘယ်လောက်ဖစ်ဖစ် ဟက်ပီးဘတ်ဒေး ဘက်ဒေးမှာ မိန်းမှဆီက ဘက်ထားတဲ့ ငွေယားလေးတွေနဲ. ကျွန်တော်တို.ကို ဘီဘီတိုက်………. ခွိ
ပြန်တွေ့လို့ ၀မ်းသာသဗျ ကပေါက်ဖော် ။
အနိတ်ဂလေးဒွေ နဲ့ ခန ခန .စနိုင်ဘာဇေ.။
မွေးနေ့မှာလည်း ကျော်ဒို့ကို ရွှေရည်လောင်းနိုင်ပါစေ နော့..။
အများဒကာက ကိုရင်ဗိုက်ကို ၀ိုင်းဝန်းကျိုဇိုနေဒေါ့ ကျနော်လည်းရောယောင်ပြီး ကျုိုဇိုလိုက်ပါတယ်
သဘက်ခါရဲ့ သဘက်ခါနေ့မှာ ကျရောက်မယ့် ဘဘဘလက်ရဲ့ အသက် (—) ပြည့်မွေးနေ့အတွက်လည်း
မွေးနေ့လက်ဆောင် comment အတိုအထွာတစ်ခု ရေးပေးထားခဲ့ပါတယ်………
Happy Birthday ကိုဘလက် ။ဦးမျိုးသန့်။ နွေးသီး။
နှစ်တွေကျိုးကျိုးကျသွားတာ… ဒီနှစ်ကိုယ်ခေါင်းကိုယ်ဆံပင်အဖြူတွေအရမ်းမြင်ရတော့မှ.. သတိပိုပိုထားမိတယ်…။
ဟက်ပီးဘက်ဒေး ဘဘ ဘလက်
ဆက်လက် ဆက်လက် ကာ ပို့စ်တွေလည်းတင်
ရွာထဲ ငါအော်ခေါ်နေတာလည်း အသံတွေတောင်ပြာနေပြီ
ဟို နားစွန်နားဖျားရပ်ကွက်က တွံတေးဘလက်ချော မွေးနေ့တော့ ညည်းမမေ့ဘူဘဲကိုး
ဒီအောက်တိုဘာက မွေးနေ့တွေကျင်းပရမှာများသားကလား မိစိန်ဗိုက်ရဲ့…
မဒမ်မိုက်က ၁၉ ရက်နေ့
ဘေဘီမိုက်က ၂၃ ရက်နေ့
ကိုဘလက် နဲ့ ကိုမျိုးသန့်က ၂၁ ရက်နေ့….
စိတ်၏ကျန်းမာခြင်း ကိုယ်၏ချမ်းသာခြင်းဖြင့် ချစ်သောမိသားစုများနဲ့
မဝေေ၀ ရဲ့ မွေးနေ့ကိုရော ထည့်မပြောတော့ဘူးလား ကိုမိုက်ရဲ့ …
သူက ကြာဆံကြော်တောင် ကျွေးထားတဲ့ဟာကို
အဲ .. ဒီလရော အရင်လကရော နောက်လရော မွေးသမျှ မွေးနေ့ရှင်တွေ နှလုံးစိတ်ဝမ်း ချမ်းမြေ့သာယာကြပါစေ ….
သဒင်းမေးတဲ့လူတွေကော ကြိုစိုတဲ့လူဒွေကော အော်ခေါ်တဲ့ အူးမိုက်ကော ကျော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..ဗျား..
အားလုံးပဲ စော်ကြည်ထီပေါက် နိုက်ကလပ်ရောက်ကြပါစေလေး..
စော် ကတော့ နေပါစေကွယ်- အဘတို့က အသက်လဲကြီးလှပါပြီ
ထီ ကလဲ ကိုယ်က ထိုးလေ့မရှိတော့ သူများပဲ ပေါက်ပါစေတော့ …
အဲ … နိုက်ကလပ်ကတော့ မောင်ရင်သွားရင် ကျုပ်ကိုလဲ လက်တို့ဦး…
စက်တင်ဘာ ၂၃ ကနေ အောက်တိုဘာ ၂၂ ထိ ချိန်ခွင်ကိုင် သော Libra zodiac များ
ကဘလက်၊ ကိုမျိုး၊ ဝေဝေ၊ မဒမ်မိုက် တို့ နဲ့ အောက်တိုဘာ ၂၃ ဖွား လက်မအကြီးကြီးနဲ့ Scorpio zodiac ဘေဘီမိုက်လေး ရေ …….
စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါ လိုရာဆန္ဒများ အားလုံး ပြည့်ဝကြပါစေ။
Libra zodiac Positive Traits
T hey are gifted withastrong sense of justice and fair play, and have fine analytical abilities.
Librans are sensitive to others and understand the emotional needs of their associates.
They are optimistic and cheerful people and have an ability to charm and delight their friends and acquaintances.
Librans are not loners, and do better in partnership both in their personal, and in their business life.
ကက်သရင်းဇီတာဂျုံး လဲ Libra zodiac ပါရှင်။
ဒီ အသံလေး မြင်လိုက်ရတာဘဲ ဝမ်းသာမဆုံးပါ မောင်ဗိုက် ရေ။
ကိုကြီးမိုက်ဆို ရွာသူရွာသားတွေကို သတိဆွဲ တပ်တွေဘာတွေလှန့်ယူရပါရောလာ….
ကလေး ဘယ်နှစ်ယောက်ရမှ ရွာပြန်လာတာဒုံး။
ကျိဇမ်း၊ခါးထစ်ခွင်ထားတာက တယောက် ၊လက်ဆွဲထားတဲ့ တောက်တောက်ပြေးက တယောက် ၊
ဒက်ဒီတိုက်တို့ မာမီနွေးသီးတို့ မာမီဆူးတို့ဖြစ်ကုန်ကြပြီ။
ညည်းပြန်လာတော့ ခုထိ ရွာကို လှည့်မကြည့်ကြသေးတဲ့
အောက်တိုဘာမွေးနေ့ရှင် အားလုံး မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။
အူးဗိုက် ပျံလာဘီ ပျံလာဘီ
လေးဘလက်ရေ သက်ဆုံးတိုင် စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပါစေ
လေးဘလက်ရော၊ ဦးမျိုးပါ….. ဆန္ဒနဲ့ဘ၀ တစ်ထပ်တည်းကျပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။
အူးဗိုက်ရေ….. မတွေ့ရတာကြာပေါ့။ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကော ဘယ်လိုလဲ။ အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်။
ပေါက်ဖော်.. မင်း.. မင်း.. တော်တော် အသည်းနှလုံး အူ ကလီစာ ကျောက်ကပ်မရှိတဲ့သူဂျီး
နှစ်ချီအောင် ရွာကို ပစ်ထားရက်တယ်… ဖားကန့်တက်ပီး ကျောက်တူးတာ အောင်တယ်လဲ
သတင်းကြားဒယ်.. ဘီအီးတော့ တိုက်အုလေကွာ…
အူးဘလက်မွေးနေ့နဲ့ အတူ ပြန်ပေါ်လာလို့ ၀မ်းသာပါဒယ်ဂွာ..
အသက် ၂၀ကျော် ဦးဘလက် စော်ကြည်၊ ထီပေါက်၊ နတ်ပြည်ရောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်..